Fandinihana tetik'asa momba ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny morontsiraka - Ellicott Dredges
Case Studies, Famerenan'ny morontsiraka
Nanomboka ny fandatsahan-dranon'i Sebastian
27 Martsa 2007 Loharano: Mpanoratra Jim Waymer, FLORIDA TODAY An'i Ellicott® Brand Series 970 dredge an'ny SubAqueous Services momba ny asa any Florida SEBASTIAN - Ny mpiasan'ny sambo dia nihazakazaka nanodidina ny ranomasina natandindomin-doza nandritra ny ampolo taona. Saingy tsy ela dia afaka mitsambikina izy ireo ary miala sasatra rehefa miampita amin'ny fantsom-pifamoivoizana azo antoka izy ireo, izay malaza ho toy ny iray amin'ny mpamitaka indrindra any Florida. Taorian'ny fandresena natao tolona nandritra ny folo taona nitondrana fahazoan-dàlana federaly dia manomboka ny 5 tapitrisa dolara ao amin'ny Distrikan'ny Sebastian ao amin'ity herinandro ity ho fanarenana indray ny moron-dranomasina feno rivo-mahery ary manamboatra lalana anaty rano ho an'ny ...
Famerenana ny tora-pasika ao New Jersey
Febroary 2006 Loharano: Cover Story WORLD DREDGING Fitrandrahana sy fananganana Trevcon's 12 in., 370HP Ellicott® mpivaro-bidy (CS) fanondrahana lalina ao Wreck Pond, New Jersey, Etazonia Ny mpandraharaha Dredge Ed Whitehurst Sand dia esorina 5,000 ft amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana ho an'ny famoriam-bola amoron-dranomasina amin'ny Lohataona. Torapasika farihy amin'ny ranomasina sy ny ranomasina any amin'ny sisin'ny ranomasina dia manampy ny tanànan'ny mpamily fandotoana rano ao an-tanàna amin'ny famoahana ny rivo-mahery ary manangana torapasika voajanahary. Wreck Pond dia loharano voajanahary 80 hektara, manilika ny tanety ary trano fonosana fantsona ary misy ao atsinanana mankany andrefana amin'ny fihetsika avaratra andrefana akaikin'ny Ranomasimbe Atlantika. Ny dobo dia misy koa ...
Ellicott®Brand Series 1170 "Dragon®" Dredge nampiasaina tao amin'ny Port Said, EVYPT Expension Project
Jiona 2001 Loharano: Fitrandrahana sy fananganana erak'izao tontolo izao, nataon'i Mort Richardson, mpamoaka boky Ellicott® Brand Series 1170 Dredge Arab Contractors 'Ellicott® Brand Series 1170 Dredge "OSMASON II" Tetikasa fanodinana fanolorana no nomena ny orinasa Ejiptiana, Arab Contractors, ho amin'ny dredge in farihy eo akaikin'ny sisin'ny Port Said. Ny tanjon'ny fifanarahana dia ny famerenana indray ny tany ho an'ny fotodrafitrasa vaovao, ny fanitarana ny tanin'ny seranan-tsambo. Ny fampiasana ny tany dia aseho ho an'ny trano vaovao sy ny fampandrosoana any amin'ny anjerimanontolo. Nanomboka ny volana desambra 1999 ny tetikasa ary kasaina ho vita amin'ny Jona 2001. Ny ...
Cape Cod, Massachusetts - Famoahana ao amin'ny Jewel Crown sy New England mampiasa Ellicott®Brand Series 670 "DRAGON®" Dredge
Loharanom-baovao: Mud Cat ™ Div., Baltimore Dredges, LLC Rehefa misy mandre momba ny morontsiraka malaza eran-tany - Cape Cod - ny eritreritra dia manakatra ny lohataona, ny rivotra mafana, ny fasika any an-trano, ny trano manofa trano amoron-dranomasina, ary ny lakana feno any amin'ny Atlantika ! Mahalana no misy mihevitra fa ny sambo sy ny sambo mpanondrana dia afaka mandeha mivezivezy, mivezivezy any amin'ny morontsiraka, na mahazo miditra amin'ny ranomasina? Raha tsy misy maloto dia tsy azo atao izany satria ny natiora, amin'ny fomba tsy miovaova sy tsy ampoizina, dia mametraka fasika, gravel, ary silt ao amin'ny fidirana mankamin'ny loharano manakiana ny fidirana amoron-dranomasina. Mora izany, mametraka dredge amin'ny ...
Dredge & Dock Lehibe Lehibe dia mampiasa Dredge marika Ellicott® ho an'ny fiarovana ny ranomasina KETA any Ghana, Afrika
Loharano: Fampisehoana rakitra momba ny fitrandrahana sy fananganana erak'izao tontolo izao Ny Keta Lagoon dia vatan-dranon'ny rano be tafasaraka amin'ny rano masira ao amin'ny Hoalan'i Guinea, amin'ny alàlan'ny tany tery. Ity aretin-tsaina dia mahatsapa fika mafy sy mitohy. Ny ampahany lehibe amin'ny trano sy fotodrafitrasa momba ny fotodrafitrasa ao an-tanànan'i Keta, ao anatin'izany ny làlana mampifandray azy amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy avaratra dia very amin'ny ranomasina. Ny velaran'ny tany eo anelanelan'i Keta sy Kedzi dia mihena amin'ny tahan'ny 4.0 ka hatramin'ny 8.0 m / taona ary tsy mihoatra ny 50 m ny sakany amin'ny toerana sasany. Raha ny ...
Ellicott® International dia nanolotra ny drendrika an-doha «Rudee Inlet II» nankany amin'ny City of Virginia Beach, Etazonia. Ny dredge 14-inch Series 970 dia ampiasaina amin'ny fitazonana ny morontsiraka fialamboly any amin'ny tanàn-dehibe. Nosoloan'ny dredge marika tsy marika Ellicott® izay ny fidiram-bola sy ny fikojakojana dia nanosika ny Filankevitry ny tanàna mba hanome fahazoana fanoloana. Ny Vaomiera Erosiana dia ekipa mpikambana dimy notazonina tamin'ny fitazonana ilay foibem-paritany. Ny konsily dia mihazona fahaiza-manao fitrandrahana fasika ao amin'ny Rudee Inlet nandritra ny 25 taona mahery, nametrahana fandaharam-pohy mitohy amoron-dranomasina. Asa vaventy iray no notendren'ny Mpitantana ny tanàna hanara-maso ny ...
Zavaboary Barnegat mitobaka izao - Voaroy indray ny torapasika Loveladies
30 Aogositra 1995 Loharano: The SandPaper, New Jersey Raha ny drpack an'ny hopper "Currituck" dia mandehandeha amin'ny fika napetrany ao amin'ny Barnegat Inlet, New Jersey, Etazonia, ny morontsiraka Loveladies ao Long Beach Township indray no mpahazo tombontsoa amin'ity taona ity. Ny US of Corps of Engineers 'dredge dia nahavita ny fahavaratra tamin'ny 65 andro. Nasiana fasika 100,000 20,000 hakiho ilay izy mba hanazavana ny lalana ho an'ireo sambo fiaramanidina sy fialamboly, asa izay vitany indroa isan-taona. Manodidina ny XNUMX metatra toradroa io fasika io dia nidina teny amoron-dranomasina tany Loveladies Beach. Vokatr'izany, hoy ny kaomisera ao amin'ny tanànan'i Frank T. Pescatore, ny torapasika any ...